အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင် ရာဘာမှိုရောဂါ (Pestalotiopsis spp.) ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ပြည်ပမှ ရာဘာပင် အစိတ်အပိုင်းများ တင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနက ထုတ်ပြန် | BETV Business News
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင် ရာဘာမှိုရောဂါ (Pestalotiopsis spp.) ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ပြည်ပမှ ရာဘာပင် အစိတ်အပိုင်းများ တင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနက ထုတ်ပြန်
betv_user 27 November 2019
နေ့စဉ်သတင်း Viewed:3times
ရာဘာအပင်မှ ရာဘာစေးခြစ်ယူနေသည့် လုပ်ငန်းခွင်ကို တွေ့ရစဉ် (Photo : Myo Thant Facebook)
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတွေက ရာဘာပင်တွေမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မှိုရောဂါ (Pestalotiopsis spp.)ကို ပြည်တွင်းသို့ မကူးစက်စေရန် ရော်ဘာပျိုးပင်၊ ပျိုးကိုင်း၊ မျိုးစေ့အပါအဝင် အပင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတို့ကို ပြည်ပနိုင်ငံတွေက တင်သွင်းမှုကို ခွင့်မပြုကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိုက်ပျိုးတဲ့ ရာဘာပင်တွေမှာ (Pestalotiopsis spp.) မှိုရောဂါ ဝင်ရောက်မကူးစက်စေဖို့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေမှာ ရာဘာပျိုးပင်အပါအဝင် အပင်အစိတ်အပိုင်းများ ဝင်ရောက်မှုအပေါ် စိစစ်ကြပ်မတ်ဖို့နဲ့ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်တွေ တင်ပြဖို့လိုတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
“ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာ ကောင်းတာပေါ့။ အဲ့ရောဂါကျရင် အရွက်တွေက အကုန်ကြွေကုန်တယ်။ အထွက်နှုန်းတွေ ကျသွားမယ်” လို့ မြန်မာနိုင်ငံရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးသန့်က ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ (Pestalotiopsis spp.) မှိုရောဂါအမျိုးအစားက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ် သိရပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ရာဘာထုတ်ကုန်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံကို အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချနေပြီး မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ရာဘာတန်ချိန် ၁.၇သိန်းကို တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ သြဂုတ်လအထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၄၇ ဒသမ ၅၅၇)သန်းကို ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
#BETVBusiness #BETVDailyNews #Bubber #Pestalotiopsis_spp.